Abakhiqizi beProfessional Tailor Scissor
Ama-Professional U-scissors Thread Clippers abakhiqizi be-Sewing Thread Snips
Ikhwalithi ephezulu yokusika i-Rotary ye-Fabric 45mm Rotary Indwangu yokusika Yokuthunga Isitolo esidayisa yonke impahla
I-China Isisindo Esikhulu Sokuthunga Isikele Abakhiqizi Bezikere Abenzi
Yokuthunga, indwangu yokuthunga, ingubo, amakhadibhodi.
Yenziwe ngensimbi ye-manganese, ngobulukhuni obuphakeme, ubukhali obuhle nokuqina. Ngemuva kokupholisha okuyisithupha, ubuso besikele busentekenteke futhi buthambile, ngokuthungwa okungaphezulu, indawo ephukile iveza i-engeli ebukhali yokusika.
Isibambo se-ergonomic esigobile esinerabha esivumela ukubambelela okunethezekile nokusika okuqondile.
Izikele ezinosayizi abahlukahlukene zingasetshenziselwa zonke izinhlobo zemisebenzi yokusika. Ukusuka ezindwangu nasesikhumba kuya ezikhwameni zepulasitiki, izinto zokupakisha nezinto ezincane futhi ezithambile, lezi sikelo ziyahlukahluka kakhulu.
Ilungele ukusetshenziswa kwabathungi bezingubo, abasiki bengqephu, abasetshenziselwa imisebenzi yasendlini, okokupholisa, ihhovisi, isikole nobuciko. Luhlala isikhathi eside futhi kulula ukuyisebenzisa, kuyisinqumo esingcono kakhulu sabantu nezitolo zezingubo.